iMAME, ilay emulator MAME avy amin'ny App Store. Ampianarinay anao ny fomba fampidinana ROMS | Vaovao IPhone
Omaly dia tonga tao amin'ny App Store ny emulator iMAME (heverinay fa tsy nahy), na dia misy ROM 9 aza ho fanao mahazatra dia efa nisy ny fomba iray ahafahana mameno ny lalao MAME sy NeoGeo amin'ny tanana.
Maimaimpoana sy manerantany ny emulator, noho izany amin'ny iPad dia tena mahafaly izany. Toy ny hoe tsy ampy izany, iMAME dia mifanaraka amin'ny iCade mba hahafahanao mankafy bebe kokoa ny traikefa arcade.
Aorian'ny fitsambikina dia hanazava ny fomba fametrahana ROMS hafa amin'ny emulator izahay, mandritra izany fotoana izany, sintomy ny emulator alohan'ny hanesoran'ny Apple azy amin'ny App Store.
iExplorer ho an'ny Mac
iExplorer ho an'ny Windows
Dingana tokony harahina:
1-Ampidino ny kinova iExplorer izay mifanentana amin'ny rafitra fiasan'ny solosainao.
2- Mandrosoa iExplorer ary ampifandraiso ny iPad anao.
3 -Mandehana amin'ny làlana: iMAME / Documents
4- Eo no tsy maintsy ampidirinao ny ROM rehetra amin'ny endrika ZIP.
5- Raha vantany vao vita ny famindrana dia tsy maintsy hakatonanao ny iMAME amin'ny iPad-nao raha eo afovoany izy ary sokafy indray mba hiseho ireo ROMs napetrakao fotsiny.
Toro lalana aorian'ny fanarahana ny fampianarana:
Tsy fantatro ny lisitra fampifanarahana an'ity emulator ity ka tsy ny ROMS rehetra no miasa.
Ny lalao sasany dia mety mitaky ny NeoGeo BIOS izay misy ireo rakitra Neo-Geo.rom, Ng-Sfix.rom ary Ng-Sm1.rom. Azonao atao ny misintona ireo fisie ireo amin'ity rohy. Raha vao sintonina, ampidiro ao amin'ny ZIP an'ny ROM ireo rakitra ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iMAME, ilay emulator MAME avy amin'ny App Store. Mampianatra anao hampiditra ROMS izahay
Fanontaniana iray, efa manana ny iMame miasa tsara amin'ny lalao an-jatony ao amin'ny iPad jailbroken ipad 2 aho, nieritreritra aho raha mametraka iexplorer ary mijery ny lalana, efa ho avy ve ireo efitrano?, Ahafahako maka tahaka azy ireo hamerina azy ireo ao amin'ny iMame voalohany ???, ary hamafa ny iMame miaraka amina jailbreak, mety ve izany ??
Heveriko fa miaraka amin'ny iExplorer dia tsy afaka miditra amin'ilay làlana misy ny rôman'ny IMAME4All ianao satria mila alalana amin'ny mpampiasa faka. Very fanampiana ihany koa ianao amin'ny wiimote. Tsy hanao ny fanovana aho, natao ho an'ireo izay tsy manana jailbreak intsony izao. Miarahaba anao!
Ok misaotra fa mbola hankafy azy io hatrany amin'ny "lafiny maizina"
Tsara ny nataonao, raha azoko natao dia teo anilako koa aho saingy fantatrao, amin'ny tsy fisian'ny mofo ... arahaba!
Ampidiro mafy ny 5 dia hoy izy:
Eny, afaka izany, tsy manana ny jailbreak aho ary mety amiko. Tsy mitsahatra misintona lalao aho ary mametraka azy ireo ary mahagaga fa miasa bebe kokoa aza ry zareo noho ny amin'ny fotoana hafa dia nanaiky ahy ilay malemy tao amin'ny pc ... Fahafinaritra.
Mamaly an'i Insert5duros
Simonkill909 dia hoy izy:
tonga lafatra, apetraka amin'ny ipad 2, fa maninona no tadiaviko ao amin'ny app ipad dia tsy azoko ??? omaly maraina dia napetrako tamin'ny iphone 4s ary tonga lafatra, hitako tao anaty app ... Mariho ao amin'ny ipad fa nisy fampiharana vaovao napetraka tamina fitaovana hafa ... fa nanai eo amin'ny ipad ... tadiaviko io, ao amin'ny app ipad ... ary tsy mivoaka ?? ? satria ??? ary ankehitriny na izany aza ... tsy maintsy nametraka azy io tamin'ny alàlan'ny rohinao aho ... raha tsy izany dia tsy nisy fomba ... hahitana azy ...
Valiny tamin'i Simonkill909
Toy izany koa no nitranga tamin'ny mpampiasa vitsivitsy. Ny App Store dia somary hafahafa nandritra ny andro vitsivitsy ary tsy nahomby firy. fiarahabana
Bocatrast dia hoy izy:
Manao ny dingana voalaza aho mba hampidirana ROMS amin'ny iPad 2 ary tsy mivoaka ireo ROMS ireo. Namerina namerina ny iPad (Home + Power) aho fa tsy nisy. Mampiasa iExplorer avy amin'ny iMac misy liona aho.
Valiny tamin'i Bocatrasto
Pedro Castilla dia hoy izy:
Manana ny imame aho fa avy amin'ny cydia miaraka amin'ny romany rehetra .. misy fonosana romana mame4all amin'ny internet ary miorina aminy io emulator io .. mitovy amin'ny an'ny PSP sy ny dikanteny hafa izy, mitovy ny romana
Valiny tamin'i Pedro Castilla
Néron dia hoy izy:
ARY IZAKO NY COIPIO ao amin'ny IEXPLORER dia manandrana mametraka ao amin'ny efitrano aho fa tsy mamela ahy hanandrana hitarika azy io fa tsy misy mahalala hoe eo amin'ny hazo kely IPAD 2.
Valio amin'i NERO
fandevenana dia hoy izy:
Rehefa manandrana miditra ny fampirimana iMAME aho dia miteny amiko ny hahatratra ny fetra mampifandray lahatahiry 5 ho an'io fivoriana io, olona iray mahafantatra ny fomba hamahana ity olana ity? Tsy manana jailbreak ao amin'ny ipad1 aho
Mamaly an'i Funegro